အိုဒွိုင်း ရဲ့ ဒဏ်ရာ ၊ နောက်တန်းလူ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးလ် နဲ့ . . . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
အိုဒွိုင်း ရဲ့ ဒဏ်ရာ ၊ နောက်တန်းလူ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးလ် နဲ့ . . . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
By Edi Tor April 23, 2019
ချဲလ်ဆီး အသင်း ရဲ့ လူငယ် တောင်ပံ ကစား သမားလေး ဟတ်ဆန် အိုဒွိုင်း ဟာ လာမယ့် ရက် အနည်းငယ် အတွင်း သူ့ရဲ့ ဖနောင့်ကြော ဒဏ်ရာ ကို ခွဲစိတ် ကုသ တော့မယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။ ချဲလ်ဆီး ကလည်း ဟတ်ဆန် အိုဒွိုင်း ကို စာချုပ် သစ် ချုပ်ဆို နိုင်ဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင် သွားမယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် တောင်ပံ ကစား သမား ဂါရတ် ဘေးလ် ဟာ အသင်း မှာ ဆက်လက် ရှိနေ မှာ ဖြစ်ကြောင်း အေးဂျင့် က အသင်း တာဝန် ရှိသူတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး အပြီး မှာ အတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘေးလ် ဟာ တောင်ပံ ကစား သမား သစ်တွေ အတွက် လမ်းဖွင့် ပေးဖို့ ယခင် ကစား ခဲ့ဖူးတဲ့ နောက်ခံလူ နေရာ ကို ပြန် ဆင်း ကစား ဖွယ် ရှိနေတယ် လို့ လည်း သိရ ပါတယ် ။
ဖရန့်ဖွတ် ဟာ ဘင်ဖီကာ က နေ အပြီးသတ် ခေါ်ယူ ထားတဲ့ တိုက်စစ်မှုး လူကာ ဂျိုဗစ် ကို ယူရို သန်း ၈၀ ဈေး သတ်မှတ် ထားတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ လက်တလော မှာတော့ ဂျိုဗစ် ကို ရီးးရဲ မက်ဒရစ် နဲ့ ဘာစီလိုနာ တို့ က စောင့်ကြည့် နေကြ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး ကွင်းလယ်လူ ကီဗင် ဒီဘရိုင်း ကတော့ ဒဏ်ရာ ကနေ အချိန် မီ သက်သာလာ မှာ မဟုတ်ဘဲ မနက်ဖြန် ကစားမယ့် မန်ချက်စတာ ဒါဘီ ကို လွဲချော် မယ် လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ကနေ ထွက်ခွာ ပြီး ဗစ်ဆယ် ကိုဘေး အသင်း မှာ ကစား နေတဲ့ စပိန် ကွင်းလယ်လူ ဟောင်း အင်နီယေစတာ ဟာ အသင်း ရဲ့ ကပ္ပတိန် သစ် အဖြစ် ပိုဒေ့ါစကီး ရဲ့ နေရာ ကို ရယူ လိုက်နိုင် တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန် မြုးနစ် အသင်း ကတော့ အာဆင်နယ် တို့ ပစ်မှတ် ထား နေတဲ့ PSG ကွင်းလယ်လူ အန်ကွန်ကူ ကို ခေါ်ယူ ဖို့ စိတ်ဝင် စား နေတယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
PSG အသင်း ကတော့ တိုက်စစ်မှုး ကာဗာနီ ရဲ့ နေရာကို အစားထိုး ဖို့ အတွက် အင်တာ မီလန် တိုက်စစ်မှုး အီကာဒီ ကို ယူရို သန်း ၇၀ ၀န်းကျင် ဖြင့် ကမ်းလှမ်း ဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
အသက်လက်တီကို မက်ဒရစ် အသင်း ဟာ လီဗာပူး ကနေ အငှားထွက် ကစား နေတဲ့ ကွင်းလယ်လူ မာကို ဂရူဂျစ် ကို ၀ယ်ယူ လိုတယ် လို့ သတင်း ကြားသိ ရ ပါတယ် ။
ရိုးမား တိုက်စစ်မှုး ဇစ်ကို ဟာ ၀က်စ်ဟမ်း ရဲ့ ကမ်းလှမ်း မှု ကို ပယ်ချ ထားပြီး အီကာဒီ ထွက်ခွာ ဖို့ ရှိနေတဲ့ အင်တာမီလန် အသင်း ကို ပြောင်းရွှေ့ ဖို့ စိတ်အား ထက်သန် နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
စပါး ကွင်းလယ်လူ အဲရစ် ဒိုင်ယာ ဟာ အိုင်ယက်စ် နဲ့ ကစားမယ့် ချန်ပီယံ လိဂ် ဆီမီး ဖိုင်နယ် ပွဲ အမီ ကြံ့ခိုင် လာခဲ့ပြီ လို့ ပိုချက်တီနို က သတင်း ကောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတ်ယ ။
ဂျုဗင်တပ် အသင်း ကတော့ ခြေစွမ်းပြ နေတဲ့ တိုက်စစ်မှုး လေး မွိုက်စ် ကိန်း ကို ၂၀၂၄ ခုနှစ် အထိ စာချုပ် သက်တမ်းတိုး ချုပ်ဆို ဖို့ စီစဉ် နေတယ် လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
အိုဒှိုငျး ရဲ့ ဒဏျရာ ၊ နောကျတနျးလူ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ ဘေးလျ နဲ့ . . . . . ယနေ့ အတှကျ နောကျဆုံးရ အားကစား သတငျးမြား
ခြဲလျဆီး အသငျး ရဲ့ လူငယျ တောငျပံ ကစား သမားလေး ဟတျဆနျ အိုဒှိုငျး ဟာ လာမယျ့ ရကျ အနညျးငယျ အတှငျး သူ့ရဲ့ ဖနောငျ့ကွော ဒဏျရာ ကို ခှဲစိတျ ကုသ တော့မယျ လို့ ကွားသိရ ပါတယျ ။ ခြဲလျဆီး ကလညျး ဟတျဆနျ အိုဒှိုငျး ကို စာခြုပျ သဈ ခြုပျဆို နိုငျဖို့ အတှကျ လုပျဆောငျ သှားမယျ လို့ ကွားသိရ ပါတယျ ။
ရီးရဲ မကျဒရဈ တောငျပံ ကစား သမား ဂါရတျ ဘေးလျ ဟာ အသငျး မှာ ဆကျလကျ ရှိနေ မှာ ဖွဈကွောငျး အေးဂငျြ့ က အသငျး တာဝနျ ရှိသူတှေ နဲ့ တှဆေုံ့ ဆှေးနှေး အပွီး မှာ အတညျပွု ပွောဆို သှားခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဘေးလျ ဟာ တောငျပံ ကစား သမား သဈတှေ အတှကျ လမျးဖှငျ့ ပေးဖို့ ယခငျ ကစား ခဲ့ဖူးတဲ့ နောကျခံလူ နရော ကို ပွနျ ဆငျး ကစား ဖှယျ ရှိနတေယျ လို့ လညျး သိရ ပါတယျ ။
ဖရနျ့ဖှတျ ဟာ ဘငျဖီကာ က နေ အပွီးသတျ ချေါယူ ထားတဲ့ တိုကျစဈမှုး လူကာ ဂြိုဗဈ ကို ယူရို သနျး ၈၀ စြေး သတျမှတျ ထားတယျ လို့ သိရ ပါတယျ ။ လကျတလော မှာတော့ ဂြိုဗဈ ကို ရီးးရဲ မကျဒရဈ နဲ့ ဘာစီလိုနာ တို့ က စောငျ့ကွညျ့ နကွေ ပါတယျ ။
မနျစီးတီး ကှငျးလယျလူ ကီဗငျ ဒီဘရိုငျး ကတော့ ဒဏျရာ ကနေ အခြိနျ မီ သကျသာလာ မှာ မဟုတျဘဲ မနကျဖွနျ ကစားမယျ့ မနျခကျြစတာ ဒါဘီ ကို လှဲခြျော မယျ လို့ သိရှိရ ပါတယျ ။
ဘာစီလိုနာ ကနေ ထှကျခှာ ပွီး ဗဈဆယျ ကိုဘေး အသငျး မှာ ကစား နတေဲ့ စပိနျ ကှငျးလယျလူ ဟောငျး အငျနီယစေတာ ဟာ အသငျး ရဲ့ ကပ်ပတိနျ သဈ အဖွဈ ပိုဒေ့ါစကီး ရဲ့ နရော ကို ရယူ လိုကျနိုငျ တယျ လို့ သိရ ပါတယျ ။
ဘိုငျယနျ မွုးနဈ အသငျး ကတော့ အာဆငျနယျ တို့ ပဈမှတျ ထား နတေဲ့ PSG ကှငျးလယျလူ အနျကှနျကူ ကို ချေါယူ ဖို့ စိတျဝငျ စား နတေယျ လို့ ကွားသိရ ပါတယျ ။
PSG အသငျး ကတော့ တိုကျစဈမှုး ကာဗာနီ ရဲ့ နရောကို အစားထိုး ဖို့ အတှကျ အငျတာ မီလနျ တိုကျစဈမှုး အီကာဒီ ကို ယူရို သနျး ရ၀ ၀နျးကငျြ ဖွငျ့ ကမျးလှမျး ဖို့ အဆငျသငျ့ ရှိနတေယျ လို့ သိရ ပါတယျ ။
အသကျလကျတီကို မကျဒရဈ အသငျး ဟာ လီဗာပူး ကနေ အငှားထှကျ ကစား နတေဲ့ ကှငျးလယျလူ မာကို ဂရူဂဈြ ကို ၀ယျယူ လိုတယျ လို့ သတငျး ကွားသိ ရ ပါတယျ ။
ရိုးမား တိုကျစဈမှုး ဇဈကို ဟာ ၀ကျဈဟမျး ရဲ့ ကမျးလှမျး မှု ကို ပယျခြ ထားပွီး အီကာဒီ ထှကျခှာ ဖို့ ရှိနတေဲ့ အငျတာမီလနျ အသငျး ကို ပွောငျးရှေ့ ဖို့ စိတျအား ထကျသနျ နတေယျ လို့ သိရ ပါတယျ ။
စပါး ကှငျးလယျလူ အဲရဈ ဒိုငျယာ ဟာ အိုငျယကျဈ နဲ့ ကစားမယျ့ ခနျြပီယံ လိဂျ ဆီမီး ဖိုငျနယျ ပှဲ အမီ ကွံ့ခိုငျ လာခဲ့ပွီ လို့ ပိုခကျြတီနို က သတငျး ကောငျး ပွောဆို သှားခဲ့ ပါတျယ ။
ဂြုဗငျတပျ အသငျး ကတော့ ခွစှေမျးပွ နတေဲ့ တိုကျစဈမှုး လေး မှိုကျဈ ကိနျး ကို ၂၀၂၄ ခုနှဈ အထိ စာခြုပျ သကျတမျးတိုး ခြုပျဆို ဖို့ စီစဉျ နတေယျ လို့ သတငျး ကွားသိရ ပါတယျ ။